[Daawo] fadeexo cusub - Madaxweyne Garguurte oo beesha Xawaadle u sameeyay Ugaas gacan ku rimisa ?
Sunday June 26, 2016 - 22:51:59 in Articles by Super Admin
Daawo halkeey gaartay xishood la-aanta iyo cadaawadda Madaxweyne Garguurte oo Ugaas gacan ku rimisa u sameeyay beesha Xawaadle si uu xaquuqdooda u duudsiiyo. Waxaa yaab leh cadaawadda heerkaan gaarsiisan sababta uu Garguurte ugu qaaday Abtiyaashiisa
Daawo halkeey gaartay xishood la-aanta iyo cadaawadda Madaxweyne Garguurte oo Ugaas gacan ku rimisa u sameeyay beesha Xawaadle si uu xaquuqdooda u duudsiiyo. Waxaa yaab leh cadaawadda heerkaan gaarsiisan sababta uu Garguurte ugu qaaday Abtiyaashiisa beesha Xawaadle. Xawaadle waxeey leeyihiin dhaqan facweyn oo labaatan tirsaday sidaas darteed xaq duudsiga uu Garguurte kula kacay waxaa lagu qori doonaa diiwaan madoow. htt
Xildhibaan Idiris Cabdi Dhaqtar oo ka mid ah Xildhibaanada lagu soo doortay Magaalada Baydhabo ee Xarunta KMG u ah Maamulka Koonfur Galbeed ayaa' dadka wax ka yaqaanno ku tilmaameen in uu yahay Shaqsi u shaqeeya Kooxda al Shabaab asagoo xilal kala duwan kasoo qabtay kooxdaasi. Full Article
Akhri Liiska Wasiiradda cusub magacyadooda iyo qabiiladda
Waagacusub Media waxeey idiin soo gudbineysaa Liiska Wasiiradda cusub ee loogu magacdaray Liitayaasha beelaha Soomaaliyeed, magacyadooda iyo qabiiladda. Full Article
XOG: Beesha Abgaal Cismaan Oo Ku Dheggan Wasaarado Muhiim Ah Iyo….